Tolvanera: waa maxay, astaamaha, asalka iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Maalmaha ugu kulul uguna qalalan xagaaga waa xaalado ku habboon sameynta ciidaha carrada ee dhulka. Tilmaamyadan ciidda waxaa lagu yaqaan magaca hopper. Waxaa sidoo kale loo yaqaan shayaadiinta boodhka tan iyo markii ay gaaraan meel aad u sareysa waxayna awood u leeyihiin inay soo saaraan dabeylo waawayn.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qashin qubka, sida loo sameeyo iyo cawaaqibka ay leedahay.
2 Abuurista qoob-ka-ciyaarka
3 Burburka cute
Maalmaha xagaaga deegaannadu waxay noqdaan kuwo oomane ah dhirta oo ku yar awgeed. Tan waxaan ku darnaa hoos u dhaca qoyaanka deegaanka waxayna noqoneysaa shuruudo ku habboon sameynta ciidaha carrada dhulka. Tifatirahani waa wax soo saari karaan dabeylo waawayn oo dabayl sababi kara waxyeelo kala duwan. Qashin-qubka waa wax aan ka badneyn dabaysha wareegga oo u eg muuqaalka duufaanka oo qaata magacyo kale sida revolvín, dab-dabaysha, iyo kuwo kale.
Waa casriyeyn hawadeed oo leh wareeg cabbir isbeddel ah. Waqtiga intiisa badan gooyuhu wuu yaryahay cabirkiisuna waa yar yahay. Badiyaa waa dhexdhexaad nus mitir dhexroor ah oo kaliya dhowr mitir sare. Muddadu badanaa waa dhowr daqiiqo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo ay runtii weynaan karto oo kacsan tahay. Mararka qaar way kici kartaa ilaa 1.000 mitir oo dherer ah waxayna soo saari kartaa dabaylo hareeraheeda gaaraya 100 kiilomitir saacaddii. Tifaftirayaasha soconaya illaa 20 daqiiqo ayaa mararka qaarkood la ogaaday.
Tilmaamahan boodhku waxay samaysmaan markay hawada kulul ku dhowdahay dusha sare. Hawada la sheegay, oo ka kulul, waa ka cufan tahay waxayna u egtahay inay dhaqso u kacdo. Markuu gaaro meelaha sare wuxuu kahelaa hawo qabow korka. Haddii xaaladaha deegaanku ku habboon yihiin, cusbooneysiinta ayaa bilaabeysa inay isku beddesho waxa loogu yeero saameynta Coriolis. Saamaynta Coriolis waxaa sabab u ah wareegga dhulka laftiisa. Maaddaama hawada kacsan ay si lama filaan ah kor ugu kacayso, sadarka hawadu wuxuu bilaabmayaa inuu si qumman u fidiyo wuxuuna sababayaa saameyn xoog leh oo meerto ah sababo la xiriira mabda'a jir ahaaneed ee ilaalinta xawaaraha xagal.
Waad dhihi kartaa qulqulatadu waxay la mid tahay qiiqa tubada hawada maraya oo hawada kulul ay u marayso wax badan oo ka sii badan xagga jihada wareega ee gudaha. Markay hawada kulul kulushahay waxay lumisaa qulqulka waxayna joojisaa kor u kaca. Sidan oo kale, waxay ka bilaabaneysaa faracdeeda banaanka hore ee xudunta eddyga. Hoos u dhaca hawada qabow wuxuu bilaabmayaa isku dheelitirka hawo diirimaad ah oo kor uga wareegayay banaanka. Sidan oo kale, waxaad leedahay nidaamka gebi ahaanba xasilloon.
Waxaa la dhihi karaa qashin qubka iskiis ayaa loo ilaalin karaa madaama uu ku soo baxayo dhulka si xoogan u kululaanaya. Caadi ahaan waxay badanaa ku soo baxdaa dhul cidla ah, lama degaan ama dhul asfalt ah. Noocyada carradu waxay wadaagaan astaamaha guud ee ah inay awood u yeeshaan kuleylka si ka fudud ficilka shucaaca qorraxda ee dhacay. Maaddaama hawo aad u diiran oo ku xigta lagu falanqeynayo dusha sare ee masafka, hawada qabow ee ka jirta hareeraha ayaa ku dambaysa in la nuugo. Markuu nuugistani dhacdo, duulayaashu waxay ku kala baxaan ilbidhiqsiyo gudahood. Badanaa, tani waxay dhacdaa marka raacitaanku uusan aheyn mid deg deg ku filan si loo ilaaliyo xawaaraha. Sidoo kale way dhici kartaa in fiiqfurka uu baaba'o markuu ka gudbo dhul ah heerkulka heerkiisu hooseeyo.
Awoodda wadista ka dambeysa qiiqa waa heerkulka dhulka oo sarreeya si loogu oggolaado qulqulka hawada kulul inay kacdo.
Waxaan hadda eegeynaa waxyeelada suurtagalka ah ee qashinku u sababi karo ficilkiisa iyo soo-gaadhistiisa. Soo-gaadhista boorka qashin-qubka waxay sababi kartaa xaalado caafimaad oo kala duwan sida xasaasiyadda, saamaynta habka difaaca jirka, saamaynta taban ee maqaarka, indhaha iyo xabka. Soo-gaadhista xaaladdan awgeed, saamaynta qaarkood ayaa dhici karta sida neefta oo ku qabata, qumanka xanuun, cagaarshow, boronkiito, oof-wareen, neefta, xaaladaha wadnaha, shuban iyo qaar kale.
Meelaha tolvanera ay aadka ugu badan yihiin, waxaa ka jira dhibaatooyinka maqnaanshaha dugsiga iyo shaqada iyo kororka kharashka ku baxa caafimaadka iyo isbitaallada. Tusaale ahaan tan waa aagga galbeed ee ku yaal cagaarshaca buuraha Maribios. Waa mid ka mid ah meelaha ugu wasakhda badan dalka ee ay soo mareen geeddi-socodka xaalufinta in ka badan 50 sano. Sidii la filayay, geeddi-socodkan joogtada ah ee xaalufinta dhirta wuxuu abuuray aagag aan la faa iideysan karin oo leh dhul oomane ah oo u roon sameynta ifafaalaha saadaasha hawada. Intaa waxaa dheer, waa inaan ku darnaa xaqiiqda ah in aagaggan lagu soo rogay duqeyn isdaba joog ah oo walxaha sunta ah, oo aan ka helno sunta cayayaanka, doogga iyo Bacriminta Dhammaan kiimikooyinkani waxay dhaawac daran u geystaan ​​bacriminta carrada oo waxay meelaha ugu wax soosaarka badan u rogaan meelo oomane ah.
Sidaan ku aragnay bilowga maqaalka, waa meelahan kuwa ku habboon qarniga qashin-qubka. Boorka ka soo baxa carrada ugu badan ee oomanaha ah ayaa ah midka xambaarsan hadhaaga walxaha sunta ah ee caafimaadka waxyeellada u leh. Isla taas ayaa ku dhacda bakteeriyada iyo fayrasyada, manka, nabarrada, qaybaha dhirta iyo cayayaanka kuwaas oo si gaar ah u saameeya carruurta, haweenka uurka leh iyo dadka da'da ah. Sababtaas awgeed, qashin-qubka wuxuu abuuraa budo ay tahay in loo qaato caafimaadka.
Dhibaatooyinka ay keento qashinku waa in la tixgeliyaa. Hal sano gudaheed, in ka badan 3000 oo qof oo ay dhibaatadu saameysey ayaa laga soo sheegey Baasifiga iyo waqooyiga bartamaha dalka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa qashinku yahay iyo saameynta uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hopper